Arsène Wenger oo shaaca ka qaaday shaqada ugu adag ee dhanka isboortiga – Gool FM
Arsène Wenger oo shaaca ka qaaday shaqada ugu adag ee dhanka isboortiga
(Yurub) 23 Okt 2020. Arsene Wenger ayaa ka soo muuqday wareysi xiiso badan ee uu bixiyay, kaasoo uu kaga hadlay mowduucyo kala duwan, sidoo kale wuxuu taabtay qaar ka mid ah fikradaha la soo bandhigay ee lagu hormarinayo kubadda cagta.
Macalinkii hore kooxda Arsenal ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay waxyaabo badan, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waan jeclahay kubadda cagta haatan sababtoo ah mar walba waxay ku jirtaa horumar joogto ah, laakiin jaceylka aan u qabo kubadda cagta waxaa hoos u dhigaya, marka loo fiiriyo awooda taasoo horseedi doonta in la isugu keeno ciyaartoydii ugu fiicneyd kooxo dhowr ah, isla markaana si lama filaan ah dhinac loo waayo”.
“Kooxuhu waxay si xawli ah ugu sii kordhayaan diyaarinta ciyaartoy. Markii aan bilaabay tababarka, waxaan ahaa kaligeey waxayna arrinta ku dhamaatay iyadoo ay hareeraheyga joogaan ilaa iyo 20 qof, dagaalkeygu wuxuu ahaa inaan helo macluumaad ku saabsan hababka tababarka”.
“Laakiin maanta, dagaalkaygu waa kala soocida macluumaadka xad dhaafka ah, waxaan aaminsanahay iyadoo loo marayo horumarka sayniska, tababarka mustaqbalka inuu noqon doono bixinta mas’uuliyadaha iyo u furfurnaan joogta ah iyo waxa ugu fiican adduunka, waxaana qiyaasi karnaa in tababarayaasha, 10/15 sano gudahood, aysan daruuri noqon doonin inay noqdaan ciyaartoy hore”.
Ugu dambeyn Arsène Wenger ayaa wuxuu shaaca ka qaaday shaqada ugu adag ee dhanka isboortiga, wuxuuna yiri:
“Xirfadda ugu adag ee isboortiga waxay noqoneysaa waa inaad tahay xirfadle kubadda cagta ah, sababatoo ah waa xirfad lagu ciyaaro lugaha, waana inaad u kala qaybisaa dareenkaaga xagga sarre iyo hoose ee jirka, waxaana jira kubad, saaxiibo iyo kuwa kaa soo horjeeda, waana inaad noqotaa mid farsamo ahaan iyo maskax ahaanba adag”.